BLI Quebec | BLI Zvikoro zveMitauro muCanada
Zvikoro zveduBLI Quebec
Kunyudzwa Zvakazara Muguta renhaka
Huya kuQBECIZVO ZVINHU ZVINONYANYA
BLI Quebec Chikoro cheFrance muCanada chiri mukati meQuebec City. Campus yedu inowanikwa munzvimbo inonakidza, Nouveau Saint-Roch, ndiyo inogara vakatarisana muQuebec City. Iri padhuze nehuwandu hwakawanda hwezviitiko zvinogona kupihwa neguta: nhoroondo, tsika, gastronomic uye yekushanyira nzvimbo!
QuebecDzidza muguta rakanaka renhaka
BLI Quebec yakavambwa muna 1976, uye yave ichipa French makosi muQuebec Guta kuvadzidzi vepasirese kubva pasi rese!
Yakatenderwa neMitauro Canada, BLI Quebec ine makore makumi mana neshanu yekupa zvidzidzo zveFrench semutauro wekunze. Zvivakwa zvedu zvemazuva ano zvinopa vadzidzi nzvimbo yakasununguka uye inonakidza inoita kuti kudzidza kwacho kufadze kwazvo uye kunakidze.
Kana iwe uchida kudzidza French, huya BLI uye ugare neyakasiyana kunyudzwa kudzidza ruzivo.
12 Vadzidzi Pamakirasi
Quebec iguta rakanaka reCanada nhaka. Mwoyo wetsika inotaura chiFrench muAmerica. Chidimbu cheEurope pane iyo nyika itsva.
Iri pamahombekombe makuru eSt-Lawrence River, Quebec Guta ndiyo imwe yemaguta anoyevedza munyika, uye guta guru reruwa rweQuebec.
Guta rakakurisa rinotaura chiFrench muCanada, Quebec Guta ndiyo nzvimbo yakakodzera yekuzvinyudza mumutauro wechiFrench uku uchinakidzwa nezvose zvinofanirwa kupihwa neQuebec, kubva pakuona kwe whale muTadoussac, kusvika kunewaini inorira muEast Township.
Hotera ine mifananidzo yakawanda kwazvo pasi, Chateau Frontenac, iri muQuebec City.
Quebec Guta riri padyo nenzvimbo nhatu dzepasi ski resorts.
Yakatangwa muna 1605, Quebec Guta ndiro guta rekaresa muCanada
Chimwe chezviitiko zvikuru muQuebec Guta ndiyo Nguva yechando Carnival, inoitika munaFebruary wega
Quebec Guta kumusha kune yakakurumbira Ice Hotel, yakavakwa nguva yechando yese.
Vanopfuura 95% yevagari vanotaura French
Quebec Guta ndiro guta rechipiri rine vanhu vakawanda muprovince yeQuebec, mushure meMontreal.
Mari yekugara muQuebec iri pakati pezvakadzika muCanada
Kufambisa fambisa - $ 81.25 / mwedzi
Quebec ine zvinoverengeka zvakasiyana zvinokwezva zvaunogona kufarira zuva nezuva!
Kushanyira Ile d'Orleans
ComedieHA! ... uye zvakawanda!
Mabasa ese anotungamirirwa nemurongi wemabasa uye / kana mudzidzisi.
Nzvimbo yeQuebec inokutendera iwe kuti uwane nzvimbo zhinji dzakanaka padyo neguta
Dzimwe nzendo dzevhiki dzinosanganisira kuenda kuUSA kunotenga kana zvimwe zviitiko. Kana iwe uchironga kupinda muUSA iwe uchiri kudzidza muQuebec, iwe unoda inoshanda USA Visa. Iwe unofanirwa kunyorera yako USA vhiza usati wauya kuCanada. Kana iwe uchibva kuWestern Europe Nyika & Japan haufanire kunyorera yeUSA Visa pamberi, sezvo uchizokwanisa kuwana imwe kubva kuUSA Immigration pamuganhu. Pasipoti yako inofanirwa kunge ichishandira kwemwedzi mishoma uye kuverengeka muchina.